Esteri 4 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
4 Zvino Modhekai+ akaziva zvinhu zvose zvakanga zvaitwa;+ uye Modhekai akabvarura nguo dzake, akapfeka masaga,+ akaisa madota,+ akabuda, akaenda pakati peguta, akachema kwazvo zvinoshungurudza.+ 2 Akazosvika pamberi pegedhi ramambo,+ nokuti hapana aifanira kupinda pagedhi ramambo akapfeka masaga. 3 Mumatunhu ose akasiyana-siyana,+ kwose kwaisvika shoko ramambo nomutemo wake, vaJudha vakachema kwazvo,+ vakatsanya+ nokusvimha misodzi nokuungudza. Vakawanda vakawaridza masaga+ nemadota+ sepokurara. 4 Zvino vasikana vaEsteri nevakuru vakuru vake+ vakapinda mukati, vakamuudza. Mambokadzi akarwadziwa kwazvo. Akabva atumira nguo dzokuti Modhekai apfeke uye kuti abvise masaga ake. Asi haana kudzigamuchira.+ 5 Esteri akashevedza Hataki,+ mumwe wevakuru vakuru vamambo, waakanga aita kuti amushandire, akamurayira pamusoro paModhekai, kuti azive kuti izvi zvairevei uye zvaiitirwei. 6 Naizvozvo Hataki akabuda, akaenda kwaiva naModhekai munzvimbo yeguta yaiungana vanhu yaiva pamberi pegedhi ramambo. 7 Modhekai akabva amuudza zvinhu zvose zvakanga zvamuwira+ nemari chaiyo iyo Hamani akanga ati aizoisa munochengeterwa pfuma yamambo+ nokuda kwevaJudha, kuti avaparadze.+ 8 Akamupa kopi+ yetsamba yomutemo wakanga wapiwa muShushani+ kuti vatsakatiswe kuti anoratidza Esteri uye kuti amuudze nokumurayira+ kuti apinde maiva namambo, amuteterere kuti anzwirwe nyasha naye+ nokukumbirira vanhu vake zvakananga pamberi pake.+ 9 Zvino Hataki+ akapinda mukati, akaudza Esteri mashoko aModhekai. 10 Esteri akabva ataura naHataki, akamurayira pamusoro paModhekai+ achiti: 11 “Vashandi vose vamambo nevanhu vomumatunhu amambo vanoziva kuti, chero murume upi zvake kana mukadzi anopinda muna mambo muchivanze chomukati+ asina kushevedzwa, mutemo wake mumwe chete+ ndewokuita kuti aurayiwe; kutoti kana mambo akamutambanudzira tsvimbo youmambo yendarama, iye acharambawo ari mupenyu.+ Ini handisati ndashevedzwa kuti ndipinde muna mambo zvino kwemazuva makumi matatu.” 12 Zvino vakaudza Modhekai mashoko aEsteri. 13 Modhekai akabva ati vapindure Esteri vachiti: “Usafunga mumweya wako kuti imba yamambo ichapukunyuka kupfuura vamwe vaJudha vose.+ 14 Nokuti kana ukanyarara panguva ino, kubatsirwa nokununurwa kwevaJudha zvichabva kune imwe nzvimbo;+ asi iwe neimba yababa vako, muchaparara. Ndiani anoziva kana wakava vahosi nokuda kwenguva yakaita seino?”+ 15 Naizvozvo Esteri akati vapindure Modhekai vachiti: 16 “Endai, unganidzai vaJudha vose vari muShushani+ mutsanye+ nokuda kwangu uye musadya nokunwa kwemazuva matatu,+ usiku nemasikati. Iniwo nevasikana vangu,+ ndichatsanyawo, ndichabva ndapinda muna mambo, zvisingabvumirwi nomutemo; uye kana ndikaparara,+ ngandiparare hangu.” 17 Modhekai akaenda, akaita maererano nezvose zvaakanga arayirwa naEsteri.